Bayder Myanmar News – Cele , Baydin , Tech, Entertainment
November 19, 2019 adminshwekayin Comments0Comment
(Zawgyi) ဆံပင်ကျွတ်သူများ၊ ထိပ်ပြောင်သူများ၊ မျက်မှန်တပ်သူများ အတွက် ==================== ==================== နံနက် နိုးနိုးချင်း ၁- ရေဖန်ခွက် တစ်ခွက်သောက်လိုက်ပါ။ ၂- ခြေဆစ်မှစ၍ ဒူးထိ ရေဆယ်ခွက်အရင်လောင်းပါ။ ၃- ပြီးမှ မျက်နှာ အရင်သစ်ပါ။ ၄- ပြီးမှ သွားတိုက်ပါ။ နေ့လည် ရေချိုးခါနီး ၁- ခြေဖဝါး ဆားပွတ်ပါ။ ( ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်ခန့် ) ၂- ခြေဆစ်မှစ၍ ဒူးထိ ရေအရင်လောင်းပါ။ ၃- ပြီးမှ ရေချိုးပါ။ ည အိပ်ယာမဝင်ခင် ခြေဆစ်မှစ၍ ဒူးထိ ရေဆယ်ခွက်ခန့် လောင်းပြီးမှအိပ်ပါ။နေ့စဉ်လုပ်ပေးပါ။ဆံပင်ကျွတ် ရပ်သွားပြီးထူနေအောင်ပြန်ပေါက်လာပါမည်။ ဆားမပွတ်ဘဲ ဆားပုံပေါ်တက်ပီးဆားပုံကို နာနာ နင်းနင်းချပေး၍လည်းရသည်။ (ကော်ဇလုံထဲသို့ ဆားကြမ်း တစ်ပိဿဿ ခန့်ထည့်ထားပြီးရေမချိုးခင် နေ့စဉ်နာနာနှိပ်သကဲ့သို့ တက်နင်းပါ ) ထိပ်ပြောင်သူများလည်း ဆံပင်ပြန်ပေါက်ပါသည်။ မျက်စိအားကောင်းစေသဖြင့်မျက်မှန်တပ်သူများလည်း လုပ်သင့်ပါသည်။ မျက်စိမှုန်ခြင်း ကင်းဝေးစေပါသည်။ အခိုးအငွေ့များလည်း ခြေဖဝါးမှထွက်၍ အညောင်းပြေသည့်အကျိုးကျေးဇူးများလည်း ရရှိစေပါသည်။ Credit: Ma Nan (Unicode) ဆံပငျကြှတျသူမြား၊ ထိပျပွောငျသူမြား၊ မကျြမှနျတပျသူမြား အတှကျ ==================== ==================== နံနကျ…
(Zawgyi) မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဝက်ခြံအဆီအဖုတွေ ပျောက်စေမယ့်ကိုယ်တိုင်သုံးနေတဲ့ ထောပတ်စေ့ ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ======================================== မနေ့ က ကိုယ့်အကိုတစ်ယောက်နဲ့ video callပြောရင်း ဒီပို့စ်လေးရေးဖို့စိတ်ကူးရတယ်ဆိုပါတော့…..ကိုယ့်အကိုအမတွေကို ကိုယ့်လိုလှစေချင်တဲ့စေတနာကတော့အဓိကပေါ့နော်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်အကိုအမတွေထဲမှာ မျက်နှာမှာ အဆီဖုလေးတွေ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် ဝက်ခြံ နဲ့မျက်နှာအရေးအကြောင်းထင်တာတွေ တော်တော်များများတွေ့ရလို့ပါ။ ထောပတ်စေ့အကြောင်းလေးမပြောခင် ကိုယ့်အကြောင်းကို အရင်ပြောပါစေ။ကိုယ်ကတောသူပီပီ နယ်မှာနေတဲ့တလျောက်လုံးသနပ်ခါးပဲလိမ်းပါတယ် ။ရန်ကုန်ရောက်ပြီး၃နှစ်ကျော်ကာလလေးအတွင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် Cosmetics ဝယ်လိမ်းဖူးတာဆိုလို့ Bellaပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှ စုစုပေါင်း၂ကြိမ်ရယ်ပါ။ ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကလဲ ခရီးသွားတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်ရတာအဆင်ပြေလို့ပါ။ကျန်တဲ့ရုံးချိန်တွေမှာတော့ သနပ်ခါးပဲအများဆုံးလိမ်းဖြစ်ပြီးပွဲတွေရှိတဲ့အခါနဲ့စိတ်ရတဲ့အခါကျရင် ကိုယ့်အမရဲ့ Cosmetics တွေယူလိမ်းပါတယ် ။ သနပ်ခါးပဲလိမ်းလိမ်း မိတ်ကပ်ပဲလိမ်းလိမ်း ညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ရေချိုးပြီးတာနဲ့အမြဲလိမ်းဖြစ်တဲ့အရာ ထောပတ်စေ့ရယ်ပါ ။ဝယ်ရတာလဲလွယ်ကူသလို အကုန်အကျလဲနဲတာမို့နေ့တိုင်းလိုလိုလိမ်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိမ်းရလဲဆိုတော့ ကိုယ်တို့ထောပတ်သီးစားကြတဲ့အခါအတွင်းသားလေးတွေယူလိုက်ရင် အထဲကအစေ့လေးကျန်ပါမယ် ။ လူအများစုက ဒီထောပတ်စေ့တွေကို ဘယ်ဈေးကြီးတဲ့ Cosmetics မှဝယ်သုံးစရာမလိုပဲကိုယ်တို့မျက်နှာကိုအများကြီးလှသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ မသိတော့ အလွယ်တကူလွင့်ပစ်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီအစေ့ကို မလွင့်ပစ်ပဲ အရင်ဆုံးအစေ့ပေါ်ကထောပတ်သီးအစလေးတွေကို စင်အောင်ရေဆေးပေးရပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုနေလှမ်းထားလိုက်ပါ ။ ၂ရက်လောက်လှမ်းထားပြီးရင် ထောပတ်စေ့ပေါ်ကအပေါ်ခွံလေးကြွလာတဲ့အခါ ဖယ်ပစ်လိုက်ပါ ။ဘယ်လောက်ထိလှမ်းရလဲဆိုရင် ထောပတ်စေ့လေးအလယ်၂ခြမ်းကွဲပီး သံချေးရောင်ထပြီး အရမ်းကျွတ်ဆတ်ဆတ်လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လိမ်းလို့ရပါပြီ။ ၃ပတ်နဲ့ ၄ပတ်ဝန်းကျင်လောက်လှမ်းရမယ်ထင်တယ်။တခါတလေ အပေါ်ခွံသံချေးရောင်ဖြစ်နေပေမဲ့ အတွင်းအစိုဓာတ်မကုန်သေးရင် လိမ်းလို့မရသေးပါဘူး။လုံးဝခြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ ညတိုင်းအိပ်ခါနီးတိုင်း ခပ်ပါးပါးလေးသွေးလိမ်းလို့ရပြီ။…
November 18, 2019 adminshwekayin Comments0Comment
(Zawgyi) အရိုးကျီးပေါင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူ ပေါက်ပန်းဖြူကို စားပေးလျှင် အရိုးကျီးပေါင်းဖြစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ပေါက်ပန်းဖြူမှာ ပါဝင်ထားတဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးဟာ အရိုီးးပေါင်း ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဆဲလ်များကို ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပေါက်ပန်းဖြူမှာ အဖြူရောင်နဲ့ အနီရောင် ရှိပါတယ်။ ၂မျိုးစလုံး ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်း အလေ့ကျပေါက်တဲ့ အပင်မျိုးဖြစ်ပြီး ဈေးထဲမှာလည်း အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပေါက်ပန်းဖြူ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုပုံများ၊ ဆေးဖက်ဝင်ပုံများကိုလည်း မကြာခဏ ဖတ်ရှုလေ့လာရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဈေးလည်းမကြီး၊ အလွယ်တကူလည်း ရနိုင်တဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူကို မကြာခဏ ပြုတ်၍ တို့စရာမဖြစ် စားပေးခြင်း၊ အသား၊ ငါးတို့နဲ့ ဟင်းချက်စားခြင်း၊ ပြုတ်၍ သုပ်စားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးပြီး အရိုးကျည်းပေါင်းရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ကျနော်စောနွဲ့နေဆိုင်မှ ရေးသားမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လူသားအားလုံး ရောဂါကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ စောနွဲ့နေဆိုင် (ပူတာအို) ကိုးကား – ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Askstyle Media Credit-ဆရာစောနွဲ့နေဆိုင် (ပူတာအို) (Unicode) အရိုးကြီးပေါငျးကို ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ ပေါကျပနျးဖွူ ပေါကျပနျးဖွူကို စားပေးလြှငျ အရိုးကြီးပေါငျးဖွဈခွငျးမှ ကငျးဝေးစပေါတယျ။ ပေါကျပနျးဖွူမှာ ပါဝငျထားတဲ့ ဓါတျတဈမြိုးဟာ အရိုီးးပေါငျး ဖွဈစနေိုငျတဲ့ ဆဲလျမြားကို ကာကှယျပေးတယျလို့…
(Zawgyi) အိမ်မှာ အလွယ်တကူ ချက်စားနိုင်မယ့် ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ ပြုလုပ်နည်း အိမ်မှာ အလွယ်တကူ ချက်ပြုတ်စားနိုင်မယ့် ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲပြုလုပ်နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၅ ယောက်စာ ချက်ပြုတ်နည်းဖြစ်တဲ့အတွက် စားမယ့်လူ အရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး အမယ်များကို လိုအပ်သလို ထပ်ထည့်ပြီး ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ ပြင်ဆင်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဂျုံခေါက်ဆွဲ – ၂၅ကျပ်သား ကြက်သွန်နီ – ၄လုံး (ပါးပါးလှီးပါ) နံနံပင် – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ) သံပရာသီး – ၄လုံး (၄စိပ်စိပ်ပါ) အုန်းသီး – ၁လုံး (ခြစ်တံဖြင့်ခြစ်ပြီ အရည်ညှစ်ပေးပါ) (အုန်းဆီနှစ် ချက်ရန်) ပဲအကျက်မှုန့် – ၄၀ ဂရမ် ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့်ကြော် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း ကြက်သားဟင်း ချက်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကြက်ရင်ပုံသား – ၂ခု (၂၅၀ ဂရမ်) (အတုံးသေးများ တုံးပါ) ကြက်သွန်နီ – ၄လုံး (ဥသေး(သို့) ဥကြီးထက်ခြမ်းခြမ်းပါ) ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်စင်းပါ) ငရုတ်သီးမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း…
(Zawgyi) ကြမ်းပိုးကို အမြစ်ဖျက်ချေမူန်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၇) မျိုး ကြမ်းပိုး ဒုက္ခပေးလို့ အိပ်ရေးပျက်သူပေါင်း အများကြီးရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ ကြမ်းပိုးကို အင်္ဂလိပ်လို Red Bugs လို့ခေါ်ပြီး လေ့လာသူများရဲ့အဆိုအရ ကြမ်းပိုး စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ အမေရိကမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းပိုးဟာ တော်ရုံနဲ့မသေပဲ အသက်ပြင်းတဲ့ သတ္တဝါစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ သွေးကိုမစုပ်ပဲနဲ့ ၃လတိတိ အသက်ရှင်နေနိုင်ပြီး အပူချိန်၊ အအေးဒီဂရီ အမြင့်ကြီးထဲမှာလည်း အသက်ရှင်နေနိုင်ကြပါတယ်။ ရေထဲတောင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကြမ်းပိုးသတ်ဆေး မျိုးစုံရှိပေမယ့် မထိရောက်ကြပါဘူး ။ ဒါ့ကြောင့် ဂျပိုးကို အမြစ်ဖြတ်ချေမူန်းနိုင်မယ့် နည်း (၇) နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်နည်း မပျောက်ရင် တစ်နည်းနဲ့ စမ်းသပ်နိုင်ကြပါတယ်။ (၁) ဆပ်ပြာမှုန့်၊ ဆပ်ပြာကရင်မ် တစ်မျိုးမျိုးကို ရေနဲ့ဖျော်ပြီး ဂျပိုးရှိတဲ့နေရာများကို ဖြန်းပေးပါ။ (၂) ဒူးရင်းသီးရဲ့ ထူးခြားပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အနံ့ကို ကြမ်းပိုးတွေ ကြောက်ကြပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးအခွံကို အိပ်ယာဘေး၊ အိပ်ယာအောက်မှာ ထားပါ။ အိပ်ခါနီး အနံ့ မခံနိုင်ရင် ဘေးဖယ်ထားပါ။ (၃) ဆေးနည်းတစ်မျိုးကတော့ မြင်းသားအဆီကို ဆီမီးခွက်ထဲထည့်ပြီး မီးထွန်းထားရင်…
ကျောင်းကအပြန် ၉ တန်းကျောင်းသူလေးကို တည်းခိုခန်း ခေါ်အိပ်ပြီး မှ ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ကျောင်းကအပြန် ၉ တန်းကျောင်းသူလေးကို တည်းခိုခန်း ခေါ်အိပ်ပြီး မှ ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ် ကျောင်းကအပြန် ၉ တန်းကျောင်းသူလေးကို တည်းခိုခန်း ခေါ်အိပ်ပြီး မှ ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ် တိုက်ကြီးမြို့နယ် တွင် ၉ တန်းကျောင်းသူ အား တည်းခိုးခန်း၌ ခေါ်ယူ သားမယား ပြုကျင့်သဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်နေတွင် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင် တိုက်ကြီးမြို့ ၌ နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ ညနေ ၄နာရီခန့်က မိခင်ဖြစ်သူ အလုပ်လုပ်နေစဉ် တူမ‌‌တော်စပ်သူရောက်ရှိလာပြီး သမီးဖြစ်သူ အား စည်ပင်ဝန်းနေ ဇင်ကိုဦး မှ ဥပ္ပုံစုရပ်ကွက် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထိပ်တွင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့်တင်ခေါ်သွားကြောင်း ပြော၍ နေအိမ်ပြန်လာခဲ့ရာ သမီးဖြစ်သူအားမတွေ့သဖြင့် ….. ၎င်းသွားလာတတ်သည့်နေရာများသို့ လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရာ မတွေ့ရပဲ နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက်‌နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီခန့်တွင် သမီးဖြစ်သူ ပြန်လာသဖြင့် မေးမြန်းခဲ့ရာ နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီခွဲ ခန့်တွင် ဇင်ကိုဦး နှင့်အတူ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လျှောက်သွားခဲပြီး ထိုနေ့ည ၁၁နာရီခွဲအချိန်ခန့်၌ ဇင်ကိုဦး မှ မလေးရှားဝိုင်ကျေးရွာဘက်ရှိ…
ကျောင်းကအပြန် ၉ တန်းကျောင်းသူလေးကို တည်းခိုခန်းခေါ်အိပ်ပြီး မှ ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ကျောင်းကအပြန် ၉ တန်းကျောင်းသူလေးကို တည်းခိုခန်းခေါ်အိပ်ပြီး မှ ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ် ကျောင်းကအပြန် ၉ တန်းကျောင်းသူလေးကို တည်းခိုခန်းခေါ်အိပ်ပြီး မှ ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ် တိုက်ကြီးမြို့နယ် တွင် ၉ တန်းကျောင်းသူ အား တည်းခိုးခန်း၌ ခေါ်ယူ သားမယား ပြုကျင့်သဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်နေတွင် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင် တိုက်ကြီးမြို့ ၌ နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ ညနေ ၄နာရီခန့်က မိခင်ဖြစ်သူ အလုပ်လုပ်နေစဉ် တူမ‌‌တော်စပ်သူရောက်ရှိလာပြီး သမီးဖြစ်သူ အား စည်ပင်ဝန်းနေ ဇင်ကိုဦး မှ ဥပ္ပုံစုရပ်ကွက် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထိပ်တွင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့်တင်ခေါ်သွားကြောင်း ပြော၍ နေအိမ်ပြန်လာခဲ့ရာ သမီးဖြစ်သူအားမတွေ့သဖြင့် ….. ၎င်းသွားလာတတ်သည့်နေရာများသို့ လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရာ မတွေ့ရပဲ နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက်‌နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီခန့်တွင် သမီးဖြစ်သူ ပြန်လာသဖြင့် မေးမြန်းခဲ့ရာ နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီခွဲ ခန့်တွင် ဇင်ကိုဦး နှင့်အတူ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လျှောက်သွားခဲပြီး ထိုနေ့ည ၁၁နာရီခွဲအချိန်ခန့်၌ ဇင်ကိုဦး မှ မလေးရှားဝိုင်ကျေးရွာဘက်ရှိ အမည်မသိ တည်းခိုခန်းသို့…
အသည်းကြီးလျှင် ဖရဲသီးစားပါ။အသညျးကွီးလြှငျ ဖရဲသီးစားပါ။
(Zawgyi) အသည်းကြီးလျှင် ဖရဲသီးစားပါ ဆရာ ဖရဲသီးကို ​နေ့တိုင်းစားရင်​ ဘာ​တွေဖြစ်​လာမလဲဆရာ ​ပြောပြ​ပေးပါလားဆရာ။ ဘာမှမဖြစ်ပါ..စားပါ။ ရေဓာတ်(အာပေါဓာတ်)ကြွယ်ဝတဲ့အသီးပါ။ ၀မ်းအေးစေတယ်။ လေပူကိုနိုင်တယ်။ ပါးစောင်နဲ့ လျှာမှာ အပူကန်နာတွေ မကြာခန ထွက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဆေးပဲ။ အသည်းကို အဆိပ်အတောက် ပိတ်ဆို့ကျန်ခဲ့တာကို အာပေါဓာတ်က ရှင်းထုတ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အရက်သမားတွေ အသည်းကောင်းစေဖို့ များများစားပေးဖို့လိုတယ်။ အသည်းခြောက် အသည်းအဆီဖုံးသမားတွေအတွက်လည်း ကောင်းတာပဲ။ အသည်းကြီးလျှင် ဖရဲသီးစားပါတဲ့။ ကွမ်းစားတဲ့သူတွေလည်း ထုံးချိုးမတည်အောင်။ကျောက်ကပ်သန့်အောင် ဖရဲသီး နေ့စဉ်စားပေးပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။ (ဆေးဆိုးအသီးကိုတော့..သတိထားရှောင်စားပါ) Credit-ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) (Unicode) အသညျးကွီးလြှငျ ဖရဲသီးစားပါ ဆရာ ဖရဲသီးကို နတေို့ငျးစားရငျ ဘာတှဖွေဈလာမလဲဆရာ ပွောပွပေးပါလားဆရာ။ ဘာမှမဖွဈပါ..စားပါ။ ရဓောတျ(အာပေါဓာတျ)ကွှယျဝတဲ့အသီးပါ။ ဝမျးအေးစတေယျ။ လပေူကိုနိုငျတယျ။ ပါးစောငျနဲ့ လြှာမှာ အပူကနျနာတှေ မကွာခန ထှကျတတျတဲ့သူတှအေတှကျ ဆေးပဲ။ အသညျးကို အဆိပျအတောကျ ပိတျဆို့ကနျြခဲ့တာကို အာပေါဓာတျက ရှငျးထုတျနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရကျသမားတှေ အသညျးကောငျးစဖေို့ မြားမြားစားပေးဖို့လိုတယျ။ အသညျးခွောကျ အသညျးအဆီဖုံးသမားတှအေတှကျလညျး ကောငျးတာပဲ။ အသညျးကွီးလြှငျ ဖရဲသီးစားပါတဲ့။ ကှမျးစားတဲ့သူတှလေညျး ထုံးခြိုးမတညျအောငျ။ကြောကျကပျသနျ့အောငျ ဖရဲသီး နစေ့ဉျစားပေးပါလို့ အကွံပေးပါတယျ။ (ဆေးဆိုးအသီးကိုတော့..သတိထားရှောငျစားပါ) Credit-ကွညျလှငျမွငျ့(မုဒွာ)
Accidents ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာ ကူညီမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ မေမဒီ Video File
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် Accidents ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာ ကူညီမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ မေမဒီ Video File Accidents ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာ ကူညီမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ မေမဒီ Video File ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ မြန်မာအိုင်ဒေါ အဆိုရှင်လေး မေမဒီကို မှတ်မိကြပါသေးရဲ့လား ။ ပြိုင်ပွဲကြီးပြီးခဲ့ပေမယ့် အိုင်ဒေါ စာရင်းဝင် မေမဒီလေးကတော့ ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်လက်လျှောက်နေဆဲပါ …. ။ မေမဒီတစ်ယောက် ဒီကနေ့ အမြန်လမ်းပေါ်က ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုတစ်ခုကူညီခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် … ။ မေမဒီရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ “ဒီနေ့ ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်း ၈၅ မိုင်မှာသံဃာတော်တွေစီးလာတဲ့ကား Accidents ဖြစ်လို့ နီးရာ ဆေးရုံပို့ပေးခဲ့ရပါတယ် … ။ ဘယ်သွားသွား ကားကိုသေချာစစ်ကြပါ …. ကံကောင်းလို့ပေါ့ ဦးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးပဲခေါင်းပေါက်တာ ဘုန်းဘုန်းကတော့ တော်တော်သွေးထွက်နေတာ အများကြီးမဖြစ်ကြလို့ကံကောင်းတယ်”လို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သွေးအလိမ်းလိမ်းသံဃာတွေကို အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ မေမဒီရဲ့ စိတ်ထားလေးကတော့လေးစားစရာပါ … ။ ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ မေမဒီရဲ့ ကူညီမှုလေးအတွက် သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပေးခဲ့ကြပါနော် … ။ TweetShare0 Shares Unicode Font ဖွငျ့ဖတျရနျ Accidents ဖွဈသှားတဲ့နရောမှာ ကူညီမှုတှအေမြားကွီးလုပျခဲ့တဲ့…
ရေနွေးကြမ်းနှင့် နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း။ ရနှေေးကွမျးနှငျ့ နှလုံးခုနျ ရုတျတရကျ ရပျတနျ့ခွငျး။
(Zawgyi) ရေနွေးကြမ်းနှင့် နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ပက်သက်တဲ့ဆောင်းပါးလေးပါ။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ဖို့ သတိပေးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ နှလုံးခုန်ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး နဲ့ ဂျပန်လူမျိုး တွေ ဟာ ထမင်းစားနေစဉ် မှာ ရေနွေး သောက်သုံးတဲ့ အလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ရေအေး (ရေခဲရေ သောက်သုံးလေ့ ) မရှိကြပါဘူး။ ခုချိန်မှာတော့ သူတို့ဆီက ထမင်းစားစဉ် ရေနွေးသောက်သုံးတဲ့ အလေ့အထကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့ရေခဲရေ သောက်သုံးသူတွေ အတွက်တော့ သက်ရောက်မှု့ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ထမင်းစားပြီးတော့ ရေခဲရေ ဒါမှမဟုတ် အအေးတခုခု သောက်သုံးလိုက်ခြင်းဟာ အတော်လေး အရသာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရေခဲရေ ကနေပြီးတော့ မကြာခင်ကမှ စားသုံးထားတဲ့ အစာတွေကို ဆီခဲတွေလို အစိုင်အခဲအဖြစ်ကို ရောက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ အဖတ်တွေကလဲ အက်စစ်အဖြစ် တုန့်ပြန်ပြီးတော့ အဲတာတွေကို ဖြိုခွဲပြီးတော့ အူနံရံတွေကနေပြီး အခဲအစာတွေထက် ပိုမို လျှင်မြန်စွာ စုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။ အဲတာတွေဟာ အူထဲ မှာသွားပြီးတော့…